Tomaty "Daty Yellow": ny famaritana ny karazana vary, ny karazana fikarakarana, ny tomatena - Zavamaniry mihinana - 2019
Ny karazana voankazo madinika dia malaza indrindra ankehitriny. Mihalehibe izy ireo ao an-jaridaina sy amoron-dranomasina, voankazo tsara tarehy dia tena mahafinaritra ny ankizy.
Iray amin'ireo safidy ankafizin'ny fambolena any an-tokantrano ny Rosiana malaza "Data Yellow", izay manome vokatra tsara sy mahafinaritra miaraka amin'ny tsirony mahaliana.
Amin'ny antsipirihany momba ireo voatabiha ireo, dia holazainay amin'ity lahatsoratra ity ianao. Vakio ny fanoritsoritana feno momba ny karazany, miezaha hahafantatra ny toetrany sy ny toetrany amin'ny fambolena.
Ireo singa mitombo
Olana sy aretina: fomba fiadiana
Tomato Daty Yellow: famaritana karazana
Ny gona Phenic Hybrid dia avy amin'ny orinasa Rosiana, izy io dia ampitaina amin'ny fahanterana amin'ny faritra rehetra, afa-tsy ny avaratra. Any amin'ny toeram-pirahalahiana mafana dia azo atao ny mipetraka amin'ny tany, amin'ny famokarana, dia tsara kokoa ny manamboatra voatabia ao amina trano fisotroana ary trano fonenana. Tomaty mavo Phenic - Hybrid F1, dia midika hoe semi-determinant. Ny kibay manana haavo 90 ka hatramin'ny 150 cm, dia azo atao ny mitombo amin'ny trellis, horizontaly sy ny sipa avoitra na eo amin'ny tady.
Ny daty voatabia dia mavo - varimbazaha farafaharatsiny, voatabia amin'ny voatabia amin'ny volana Mey, ny voankazo voalohany dia mihinana amin'ny tapaky ny volana Jona. Mangatsiaka be izy io, afaka mandefitra ranonoram-bary kely, saingy amin'ny hainandro tsy tapaka dia avo kokoa ny vokatra. Ny daty mavo izay amina trano fisotroana na eny an-tsaha, dia mety amin'ny fambolena vilany lehibe sy vilany ho an'ny fikojakojana ao an-trano.
Tombom-bary varimbazaha mena dia mendrika ny fanehoan-kevitra tsara eo amin'ireo mpamboly mpamboly. Anisan'ny tombontsoa lehibe indrindra:
tsiro avo dia avo;
fanoherana ny aretina sy ny bibikely;
azo ampiasaina ho an'ny trano fivoahana ary toerana misokatra;
ny fanoherana ny toetr'andro madinika.
Anisan'ireo tsy fahampiana sy ny endriky ny hybrid:
mihena ny fahavaratra;
Ny hybride dia tena miezaka ny hisotro sy hanome sakafo.
Bibilao madinika madinika, voatabiha oval, malefaka, mamirapiratra, misy tendro kely manify. Eo amin'ny sehatry ny fahantrana ara-batana dia mahazo loko mavokely manankarena izy ireo. Ny nofo dia mavo mavo, mamy, mamy, misy tsiram-borona tsara tarehy. Ny voka-dratsin'ny voka-dratsiny sy ny saro-bidy dia mahatonga ny voankazo ho an'ny zaza sy ny sakafo ara-tsakafo. Ny fihanaky ny voatabia dia tena manintona, saingy tsy sarotra, tsy mitombo izany rehefa voatahiry sy voatahiry.
Ny voankazo dia levona vaovao: ao salads, appetizers, cocktails, podkarni. Ny tomaty dia mety amin'ny sakafo sy ny fanaka amin'ny sakafo. Ny hoditra malefaka sy ny sakaiza dia mahatonga azy ireo ho tsara indrindra ho an'ny fiterahana, indrindra amin'ny fifangaroana legioma, ary koa amin'ny famonoana.
Tahaka ny karazan-tsakafo faran'ny taom-piasana rehetra, ny voatabia Finik dia afafy amin'ny zana-ketsa amin'ny volana Martsa. Ho an'ny zana-ketsa, ny tara-pahazavana avy amina tanimboly, siramamy ary fasika dia ilaina, satria ny taha ambony indrindra dia ny supphosphate, ny dite potasy sy ny lavenona hazo. Ny halalin'ny famafazana voa - tsy mihoatra ny 1 santimetatra.
Ny zana-ketsa dia mila fanazavana fanampiny sy rano mangatsiaka amin'ny rano mafana. Rehefa vita ny fananganana ny 2 amin'ireo ravina ireo, dia atambatra ireo zana-ketsa. Ny famindrana amin'ny trano fivoahana na ny tany malalaka dia atao amin'ny faran'ny volana Mey, rehefa mafana ny tany. Alohan'ny handehanana any, ny lavadrano dia feno rano mafana.
Ny tomaty dia mitaky fitaovana ho fanohanana na trellis. Manoro hevitra ny pasynkovanie, fa afaka miala sasantsasany ambany ihany koa ianao, hanome vokatra ihany koa izy ireo. Ilaina ny fikarakarana be dia be mandritra ny fivoahan'ny voninkazo sy ny voankazo, tsara kokoa ny mampiasa rano mafana. Mba hampihena ny fanamainana ao amin'ny trano fivoahana trano fisotroana tafo miaraka amin'ny mullein matevina.
Farafahakeliny in-droa isan-kerinandro, mila tsiranoka ara-pihetseham-po amin'ny zavamaniry ara-boajanahary na mineraly be pitsiny ny voatabiha. Tokony hovahana matetika ny tany, ary tsy manimba ny fakany.
Eo amin'ny toeran'ny tany malalaka, ilaina ny manova ny kolontsaina amin'ny toerana, manangona voatabiha amin'ny toerana vaovao isaky ny 2-3 taona. Tondraka tsara ny moron-dranomasina izay maniry ny ahitra: parsley, beans, salady, na voanio. Ny fotsy hoditra dia manohitra ny aretina iombonana amin'ny voatabia, fa mitaky fepetra amin'ny fisorohana tsy maintsy atao: fiparitahana, famokarana matetika ary ny fanarahan-dalànan'ny fitondram-panjakana.
Amin'ny sehatra misokatra, dia mety hisy fiantraikany amin'ny tavy mena ny voatabia, amin'ny lohataona mafana dia atahorana ny tazo-kisoa, tavy sy fotsy. Miady amin'ny vahaolana ampiasaina amin'ny alàlan'ny potassium permanganate sy amoniaka, ary koa ny bio-zava-mahadomelina izay azo vidiana amin'ny fivarotana manokana.
Tazo tsara tarehy sy mamy misy loko mavo mangamanga - ny tena endriky ny trano fonenana. Amin'ny fikarakarana ny fepetra takian'ny landihazo tsotra indrindra, ny volokano Phenic dia hankafizin'ny mpamboly amin'ny vokatra tsara sy ny toetran'ny mpanjifa avo lenta.
Ny fomba hitondran'ny faritra amin'ny tsimoka
Ahoana ny fomba famolavolana sy famokarana cucumbers "Emerald Flow"
Bilbergia: ahoana no hikarakarana, ahoana no hambolena, nahoana no tsy mamelana
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fanamboaran-tsakafo marevaka ny trano fandroana - voatabia "Daty Yellow": varim-panazavana momba ny voatabia, indrindra ny fikarakarana